ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Singapore အလုပ်ရှာသော အခက်အခဲများ
Singapore အလုပ်ရှာသော အခက်အခဲများ
စလုံးကိုလေယာဉ်ဆိုက်တဲ. အချိန် က သူငယ်ချင်း ရဲ. အလုပ်ချိန်ဖြစ်နေလို. လိပ်စာ ကို Taxi ဆရာ ပြပြီး နေရမဲ. အိမ်ကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ချီတက်လာရတယ်လေ။ စလုံးက တရုတ်တွေ က တော်တော် ကိုသဘောကောင်းတယ် ခင်ဗျ ရွဲ.ပြောတာ၊ Taxi ဆရာ ကလဲ တိုက်ခန်း (Block)အောက်မှာ ထိုးရပ်ပေးတယ်လေ။ ဒီတော. ပိုက်ဆံရှင်းပြီး ကိုယ်.အထုပ်အပိုးတွေ ကို ကားနောက်ဖုံးကနေ ဆွဲချရတယ်ပေါ.။ ဒါကို ကူညီမယ် မရှိပဲ အဲ.နေ.က မိုးရွာ နေတော. သူကားနောက်ဖုံး ရေစိုမှာ ဆိုးလို. “အမြန်လုပ် ကားနောက်ဖုံး ရေစိုကုန်တော.မယ်” လို.တောင် မာန်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒါကတခု။ နောက်တခု က အခန်း က အပေါ်ထပ်မှာ ဆိုတော. တက်ရတာပေါ. ဓါတ်လှေကားနဲ.။ တိုက် က ဓါတ်လှေကား ၂ စင်း ရှိတော. မဟုတ်တဲ. ဘက်ကို မှားတက်သွားမိတော. လုံးဝ ကိုလမ်းပျောက်တော.တာပေါ.။ တိုက်နံပါတ်ကလဲ တူနေတယ် ဘာလို.ရှာမတွေတာတုန်းဆိုတော. တိုက်ခန်း တခုက ထွက်လာတဲ. တရုတ်မ ကြီးကို မေးတယ် တိုက်ခန်း နံပါတ် xx-xx က ဘယ်မှာ တုန်း ဆိုတော. “Don’t Know” ဆိုပြီး အခန်းတံခါး ကိုဆောင်.ပိတ်ပြီး သူ.အိမ်ထဲ သူဝင်သွားတယ်လေ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မသိဘူးလို.ပြောရင် သေမယ်ထင်မယ်နော်။ ပုံစံ က သူအိမ်ရှေ.ထွက် လေညင်းခံ နေတာ ကို နှောက်ယှက်ခံရတဲ. မျက်နှာပေါက်နဲ.။ သြော် နောက်ဆုံးမှ အောက်ဆင်း ပြီး နောက် ဓါတ်လှေခါးနဲ. တက်မှ စလုံးက ကိုယ်.ရဲ. Home Sweet Home လေးကိုရောက်ပါတော.တယ်။ သူငယ်ချင်း က အိမ်သော.ကို အိမ်ရှေ.က ရူးဖိနပ် ထဲ ထည်.ထားတယ် နိူက်လိုက်လို.မှာထားလို. နိူက်ပြီး အိမ်ထဲ ရောက်ပါတော.တယ်။ ဟူး မောလိုက်တာ။
ကဲ လုပ်ငန်း စပြီဗျိုး ညှားပြီ www.jobstreet.com , www.jobsdb.com တို. Strait Time သတင်းစာ တို.နဲ.။ အလုပ် ကတော. လျှောက်တယ် ၁ နေ.ကို ၅ ခုနှင်.အထက်။ အဲ.ဒါတောင် ၁ ပတ်လုံးမှ အင်တာဗျူးက ၂ ခုလောက်ရရင်ကံကောင်း။ တခါ ကြုံဖူးလိုက်တယ် ဖုန်း ၀င်လာတယ်လေ ကိုယ်ပြောတဲ. အင်္ဂလိပ် လေသံကို နားထောင် ပြီး “Where are you from?” လို.မေးတယ်လေ။ ဒါနဲ. ဖြေတာပေါ. “MYANMAR” လို.။ ပြန်ပြောတယ် စလုံးမ က “Sorry, BURMA CANNOT” ဆိုပြီး ဖုန်းချသွားပါလေရဲ.။ အင်း မလွယ်ပါလားနော်။
ကျွန်တော် – Why did you apply my S Pass with salary of less than $1800.
စလုံး မ – I just applied with your actual salary.
ကျွန်တော် – No. As one of MOM Criteria, the salary must be at least $1800 foraS Pass Holder.
စလုံး မ – Sorry. I cannot do such kind of illegal thing.
ကျွန်တော် – OK. Let do it this way. Just apply for me with $1800. Every After pay day, you can deduct from my salary Ok?.
စလုံး မ – Sorry. I think my boss won’t agree with that. You go home and wait lah. Let me discuss with my boss.
အခုတော. မရတော.ဘူးလေ။ ပုံစံ က ခေါင်းပန်းလှန် ရမယ်။ ခေါင်း က မြန်မာ ၊ ပန်း က မလေး ပေါ.။ ဒီတော. ငါ မလေးရှားရင် ပြန်ဝင်လာလို. Stay မရသည်ထားဦး မလေးရှား ကို ပါ အဆစ် ရောက်ဖူးမယ်။ ဟိုက ကျောင်းတက်နေတဲ. သူငယ်ချင်းကလဲ “စိတ်မပူနဲ. လာခဲ. စလုံးရောက်တုန်း မလေး လာလည်ပေါ. ကွ ကံကောင်းရင် စလုံး ပြန်ဝင်လို. ရရင်ရမှာ၊ မရတော.တော. မလေး ရောက်တာ အမြတ်ပေါ. ” လို.တော. မလေး ကို စိတ်ယိုင်သွားပြန်ရော။
ကြားရပြန်ပါတယ် နောက်တယောက်ဆီ က။ “ဘာလို.မလေးရှားသွားမှာလဲ။ စလုံးကို ပြန်ဝင်လာလို.မရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မင်း ၂ ခါ ကုန်ဖြစ် မှာပေါ.။ မြန်မာပြည် ကို ပဲ ၁ ပတ်လောက် ပြန်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာရင် Visa သက်တမ်း က ၆ လ ထိ တောင် ရတယ်” လို. ဆိုပြန်ပါတယ်။
Officer – ဘာလို. စင်ကာပူမှာ ၁ လ ထပ် နေချင်ရတာလဲ။
ကျွန်တော် – ကျွန်တော်. S Pass က လစာမှာ 1800 ထက်နည်းလို. Reject ထိတယ်။ အဲဒါကြောင်.မလေးကို ခဏ Stay ရှောင်လိုက်တယ်။ အခု ကျောင်းတက် မယ်လို.ဆုံးဖြတ်ထားတဲ.အတွက် စလုံး က ကျောင်းတွေ ကို အေးအေးဆေးဆေး စုံးစမ်း လို.ရအောင် ၁ လ လောက် တော. လိုချင်ပါတယ်။
ကလင် ကလင် “မင်းကို ငါ.တို Boss က အင်တာဗျူး မယ်တဲ. လာခဲ.ပါဦး” ဆိုပြီး ရင်းနှီးသူ အစ်ကိုတစ်ယောက်ဆီမှ ဖုန်းဝင်လာတယ်။ သူနဲ. က အရင်ကတည်း ကိုယ်.အခက်အခဲတွေ ကို ပြောပြထားတာကိုး။ အဲဒီ အင်တာဗျူး တခုလုံး အဆင်ချောပါတယ်။ လူခံ ကလဲ ရှိနေတော. အားရှိတာပေါ.။ ခန်.မခန်. ကို နောက်နေ.ဖုန်း ဆက်မယ် ဆိုပြီး သူဌေး ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ကုမ္ပဏီ ကို လာခဲ.ပါ။ S Pass တင်ရအောင်” တဲ.။ ဒီကုမ္ပဏီ ကျတော. S Pass ကို ၁၈၀၀ နဲ. လိမ်လိမ်မာမာ တင်ပေးတယ်။ သူတို. က နပ် ပြီးသားလေ မြန်မာတွေ ကို ဈေးနှိမ်ပြီး ခန်.နေကျလေ။